FaceTime ကို PC Windows အတွက် DOWNLOAD 7, 8 & ဝင်းဒိုးကို 10 🤑
မင်္ဂလာပါ FaceTime Lover! သင်ကဲ့သို့သင်၏ Windows PC အတွက် FaceTime ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုရှုပ်ထွေးနေဆဲ Window များအတွက် FaceTime 7, Window များအတွက် FaceTime 8 သို့မဟုတ်သင် download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုခငျြရင်တောင် သင့်ရဲ့ window တွင် FaceTime 10 operating system ကိုဖြစ်လျှင်ဤဆောင်းပါးကိုလိုက်နာ?
PC အတွက် download, FaceTime
pc ပြတင်းပေါက်များအတွက် FaceTime 10
ပြတင်းပေါက်အဘို့အ FaceTime7လက်ပ်တော့
သင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာပေါ်မှာ facetime နိုင်ပါတယ်
pc download ပြုလုပ် FaceTime
ဤတွင်ဤဆောင်းပါး၌, ငါသည်သင်တို့ကိုပြတင်းပေါက် platform ပေါ်တွင်အကျင့်ကိုကျင့်ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံး app ကို FaceTime ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုလတံ့သောအခြို့သောရိုးရှင်းသောအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်ပေးပြီ.
သငျသညျပြတင်းပေါက်လက်တော့သုံးပြီးနှင့်ချင်နေတယ်ဆိုရင် ပြတင်းပေါက်အဘို့ကို download FaceTime7လက်ပ်တော့ သို့ဖြစ်လျှင်ဤဆောင်းပါး၌ဖုံးလွှမ်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အရာခပ်သိမ်းရုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးထားသောရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်း.
Apple က Inc မှအားဖြင့် FaceTime. အများဆုံးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်, လောကဓာတ်လုံးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမူကြောင်းကိုအသုံးဝင်သောနှင့်အဆုံးစွန် videotelephony ဆော့ဖျဝဲ. ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မှာတော့, တိုင်းလူတစ်ဦးအခြားသူများနှင့်လူမှုရေးအရချိတ်ဆက်နေဖို့လိုလား.
မျက်နှာအချိန်များ၏အကူအညီဖြင့်, သငျသညျစိတ်ဝင်စားစရာသင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်လက်ရှိနေရန်နှစ်ဦးစလုံးဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုနိုင်သည်. အချိန်ကျမ်းပိုဒ်နဲ့အတူ, FaceTime app ၏အသုံးပြုမှုလွန်စွာ Apple ထုတ်ကုန်အသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်တိုးမြှင့်ထားပါတယ်.
ဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးသောအရည်အသွေးဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပို့ချခွင့်ပြုအဖြစ်ဒီ app အခြားသူများထံမှအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ပါသည်. သုတေသနအရ, အိုင်ပက်အပါအဝင် Apple ထုတ်ကုန်ရှိခြင်းလူအများစု, iPhone ကို, မက်, နှင့် iPod မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ကော်ပိုရိတ်ကမ္ဘာနှင့်ထိတွေ့နေဖို့ FaceTime အသုံးပြုနေသည်.
အစပိုင်းတွင်, မကျြနှာကိုအချိန်သီးသန့် Apple ထုတ်ကုန်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်. သို့သော်၎င်း၏ထိရောက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဝယ်လိုအားမှ, ယခုသင်သည်လည်း PC အတွက် FaceTime ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. ကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မဟုတ်? အဆိုပါဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဟာလုံးဝယခုပြောင်းလဲသွားပြီ.
ပြည်သူ့ပိုပြီးဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုထက် e-mail သို့မဟုတ်မေးလ်လုပ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့. အဖြစ်မှန်အချိန်ဒီစမတ် app ကို၏အကူအညီနှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူမည်သူမဆိုဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုင်လျက်စကားပြောသို့မဟုတ်တွေ့မြင်နိုင်သည်.
အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကဲ့သို့အခြို့သောနိုငျငံမြားတှငျ, လူအများစုကတခြား Apple ထုတ်ကုန်အသုံးပြုသူများနှင့်ဆက်နွယ်နေပါကအသုံးဝင်သူတို့ကိုဆက်လက်စေသည်ဖြစ်သော Apple ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုနေ.
သို့သော်အချို့နိုင်ငံများအတွက်, စားသုံးသူများဟာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဒစ်ဂျစ်တယ်လှုပ်ရှားမှုများများအတွက် PC ကိုသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်. ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့အသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူခြင်းရောက်စေဖို့, ဤဆောင်းပါးတွင်ထိထိရောက်ရောက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်က iOS app ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်. ဤသူသည်သင်တို့ကွဲပြားခြားနားသော Apple ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုနေသူကိုအခြားလူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဖွ.
သငျသညျကို download လုပ်လိုလျှင်ဒီတော့ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုစောင့်ရှောက်, သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကွန်ပျူတာအပေါ်အဖြစ်မှန်အချိန်များ၏ implausible app ကို install လုပ်ပြီး run.
1 PC ကွန်ပျူတာများအတွက် FaceTime App ကို Download လုပ်ပြီး Install:
2 PC အတွက် FaceTime Download လုပ်ပြီး Install လုပ်နည်း?
2.2 သင့်ရဲ့ PC မှာ FaceTime က App ၏အင်္ဂါရပ်များ:
PC ကွန်ပျူတာများအတွက် FaceTime App ကို Download လုပ်ပြီး Install:
ထုံးစံအတိုင်း, Apple က iPhone များအပါအဝင်အားလုံးကိရိယာများပေါ်တွင် FaceTime တစ်ခု Built-in app ကိုရှိပါတယ်, iPod, အိုင်ပက်, နှင့် Mac. သို့သော်သင်သည်သင်၏ PC ပေါ်မှာဒီ option ကိုမရပျနိုငျ. ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, သင်တစ်ဦး emulator ကို အသုံးပြု. မျက်နှာအချိန် install လုပ်ရန်ရှိသည်. ဤသည်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုကူးပြောင်းနေရာ:
ပထမဦးစွာ, သင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရပါမည် iPadain emulator. သငျသညျပေးထားသောလင့်ခ်ကို အသုံးပြု. ကရှိနိုင်ပါသည်: ipadian.net
အဆိုပါ iPadian emulator ဒေါင်းလုပ်ပြီးနောက်, ဖွင့်လှစ် ယင်း၏ဖိုင် နှင့် install ကပေးထားသောလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း.
ထိုအခါ, သင့်ရဲ့ iPadian emulator ကို install တစ်ကြိမ်, ယခုသင်ဖွင့်နိုင်ပြီး လော့ဂ်အင် လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ပေးခွငျးအားဖွငျ့. ဒါဟာခြေလှမ်းသင့်ရဲ့လိုအပ်ပါတယ် Apple ID နဲ့ password ကို.
အခုဆိုရင်သင့် FaceTime app ကိုရှိနိုင်ပါသည်. သို့သော်အမှု၌သင်အလွယ်တကူ Apple က App Store ကိုအစီအစဉ်၏အကူအညီဖြင့် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်ထို့နောက်သူကမတှေ့နိုငျ.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ၎င်း၏အီးမေးလ်ကို အသုံးပြု. Apple ကကမ္ဘာ၏မည်သည့်အဆက်အသွယ်ရိုက်ထည့်ပါ, အသုံးပြုသူအိုင်ဒီသို့မဟုတ်တစ်နံပါတ်နှင့်အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်စတင်ရန်. သင်က app ထဲမှာပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းအိုင်ကွန်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအလုပျနိုငျ.
PC အတွက် FaceTime Download လုပ်ပြီး Install လုပ်နည်း?
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအောက်ပါသင့်ရဲ့ PC မှာ FaceTime သုံးစွဲဖို့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်:
PC ပေါ်မှာ FaceTime ဒေါင်းလုပ်ပြီးနောက်ဖြစ်နိုင် BlueStacks သင့်ရဲ့အပေါ် PC ကို.
သငျသညျအရာရှိတဦးက site မှ BlueStacks application များဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် bluestacks.com.
ပြီးနောက် ဒေါင်းလုပ် BlueStacks, ဒါကြောင့် Install နှင့်ဒေါင်းလုဒ်ပြီးဆုံးတစ်ချိန်က, ပြန်စတင်သည် သင့်ရဲ့ PC မှာ.
ဒါဟာ BlueStacks application များစတင်ပြီးနောက်စတငျဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ. အနီးကပ်အတင်းမနေပါနဲ့, ဒါဟာ software ကို၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြစ်ပေါ်စေမည်.
အဆိုပါ PC ကို restart လုပ်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့, သင်၏ system အတွက်ပွင့်လင်း BlueStacks application ကို.
မီနူးသွားပြီး play စတိုးလျှောက်လွှာအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
Play Store ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်, ရှာဖွေရေးနှင့်အမျိုးအစားပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ FaceTime ပြီးတော့ Windows PC များအတွက် FaceTime Download.
ချက်ချင်း FaceTime ကိုတပ်ဆင်ရန်, ပွင့်လင်းသို့မဟုတ် Run ကို click နှိပ်, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ. *သငျသညျတခုစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုစကားဝှက်ကိုသို့မဟုတ် confirmation နေတယ်ဆိုရင်, စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်သို့မဟုတ်အတည်ပြုချက်ကိုပေး.
နောက်ပိုင်းတွင် FaceTime ကိုတပ်ဆင်ရန်, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို installation ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ. သင် FaceTime ကို install လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲသည့်အခါ, ဖိုင်ကို double-click, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ. *သငျသညျဆက်လက်ဆောင်ရွက်မီဗိုင်းရပ်စ်များအတွက် installation ဖိုင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သောကြောင့်ဒါကပိုလုံခြုံ option တစ်ခုဖြစ်သည်.
သင့်ရဲ့ PC မှာ FaceTime စတင်ရန်.
သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာမျက်နှာအချိန်အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို?
သင့်ရဲ့ PC မှာမျက်နှာအချိန်သင်အကြိုက်ဆုံး app ကို install လုပ်ပြီးနောက်, သင်ကစတင်သုံးစွဲဖို့အခြေခံခြေလှမ်းများလိုက်နာရမည်:
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install ပြီးနောက်, အဆိုပါ FaceTime app ကိုဖွင့်လိုက်ပါ. သင်သာသူ့ရဲ့ဖိုင်တွဲပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအလုပျနိုငျ.
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဤ app ကိုဖြန့်ချိလိုက်တဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏အီးမေးလျအိုင်ဒီနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုရိုက်ထည့်ရပါမည်. ဒါဟာသင်ဆက်သွယ်အခြားအသုံးပြုသူများကအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏ ID ကိုအောင်ကူညီပေးသည်. သငျသညျပြီးသားတစ်ဦး၏ ID ရှိပါက, သငျသညျမဟုတ်ရင်သင်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အသုံးပွုနိုငျ
ရဲ့ login ဖြစ်စဉ်ကိုပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ FaceTime app ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းပေါ်မှာအညွှန်း panel ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဤသည် panel ကိုသင်ဆက်သွယ်လိုဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူအပေါငျးတို့၏အမည်များစာရင်းတစ်ခုတို့ပါဝင်သည်.
သင်တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုစတင်ရန်ချင်သောလူတစ်ဦးထွက်ရှာမည်. တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာ FaceTime သုံးပြီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, သင်သည်သူတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုသိလျှင်သင်သာဆိုလူတစ်ဦးကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်.
ထိုနောက်မှ, သင် dial-up session များအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်.
သင့်ရဲ့စကားပြောဆိုမှုပြီးသွားတဲ့နောက်, သငျသညျရိုးရှင်းစွာခေါ်ဆိုမှုကိုရပ်တန့်ဖို့အဆုံး Call button ကို click နိုင်ပါတယ်.
သင့်ရဲ့ PC မှာ FaceTime က App ၏အင်္ဂါရပ်များ:
ဒါကထူးခြားတဲ့ videotelephony app ကိုမြောက်မြားစွာအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပြီး၎င်း၏ဖောက်သည်ထူးချွန်ရလဒ်များကိုကမ်းလှမ်း. ယင်း၏စိတ်ဝင်စားဖို့ features တွေ၏အချို့ရှိပါတယ်:
ဒီ app သီးသန့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်. အခြေခံအယူအဆကလူပိုနီးသောဗီဒီယို applications များ၏အကူအညီဖြင့်ထိုသူတို့နှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုခံစားနိုင်အောင်ဒီဆော့ဗ်ဝဲဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. သတငျးကောငျးကိုယခုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် 1080p ထောက်ပံ့နေသည်မျက်နှာအချိန်ဖြစ်ပါသည်.
ဒီခံစားခြင်း, သင်၏ system In-built ကင်မရာများရှိရမည်. ထိုအမှု၌သင်တို့ကိုတစ်ဦး webcam ယ်ယူနိုင်ပါသည်ထို့နောက်ကင်မရာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး.
အဆိုပါမျက်နှာအချိန်မှာလည်းမြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်ကမ်းလှမ်း 16:9 ရှုထောင့်. သင်သည်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတဲ့အခါဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခေါ်ဆိုမှုအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းသည်.
၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှုကြောင့်, ဒီ app တမန်အပါအဝင်ယင်း၏ပြိုင်ဘက်နှိုင်းယှဉ်ပါကအကောင်းဆုံးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်, Skype ကို, Google က Duo အများအပြားကပို.
တစ်ခုထူးခြားဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအားအင်္ဂါရပ်များအပြင်, သင်သည်လည်းအသံခေါ်ဆိုမှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါဟာအစမသက်ဆိုင်ဘဲမူလအကွာအဝေး၏အလွန်ကောင်းသောအသံအရည်အသွေးရှိပါတယ်
ရုပ်ပုံ Feature ကိုအတွက်ရုပ်ပုံ:
အသုံးပြုသူကို- ဖော်ရွေ interface ကို
သင့်ရဲ့ PC မှာ FaceTime ၏နောက်ထပ်ယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးလေးစားဖွယ်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုရှိပါတယ်. ဒါရိုးရှင်း, ခြောသော, လွယ်ကူ. မည်သူမဆိုအလွန်သင့်လျော်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့်နားလညျနိုငျ. ဤသည်အများဆုံးအသုံးပြုသူများကို Apple ကအားဖြင့် FaceTime app ကိုနှင့်အတူမေတ္တာ၌လုံးဝဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်.
သင့်ရဲ့ privacy နဲ့လုံခြုံရေး, သင်သည်မည်သည့်အဆက်အသွယ်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်. မည်သူမဆိုသင်ဒါကသို့မဟုတ်စိတျဆိုးလျှင်, သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု-list ထဲမှာမိမိနာမအရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အဲဒီလူကို block ဖို့ဖြစ်ပါတယ်
ဒီအပြင်, မကျြနှာကိုအချိန်မှာလည်းသည်အခြားဆွဲဆောင်မှု features တွေကမ်းလှမ်း
•သင်အလွယ်တကူဖွင့်သူတို့ရဲ့ Apple ID သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအအဆက်အသွယ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်.
•သင်သည် FaceTime မှတဆင့်အုပ်စုသည်ခေါ်ဆိုခကိုခံစားနိုင်ပါတယ်. စိတ်ဝင်စားစရာ, ဒီ app ကိုသင်မှတက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဖွ 32 အတူတူအသုံးပြုသူများသည်
•ပျော်စရာများနှင့်အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုကြစေရန်, သငျသညျစတစ်ကာများနှင့် Animoji ကိုသုံးနိုင်သည်
သငျသညျကို PC တစ်ခုရှေ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသင်၏မျက်နှာကိုပြသနိုင်သည်သို့မဟုတ်
•သင်သည် Wi-Fi သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဒေတာဆက်သွယ်မှုတစ်ခုခုကိုအားဖြင့်မျက်နှာအချိန်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်
•သင့်ဦးစားပေးအပျေါမှာမူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဒီ app ကိုသုံးနိုင်သည်
ငါဆောင်းပါးသင်သည်သင်၏ PC ပေါ်မှာ FaceTime သုံးစွဲဖို့လိုအပ်သမျှအသေးစိတ်ပြည့်စုံပြီမျှော်လင့်. သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, မှတ်ချက် box ထဲမှာဖော်ပြထားခြင်းပြုပါ. ငါသည်သင်တို့၏မေးခွန်းကိုဖြေနှင့်သင့်မေးမြန်းချက်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်.